အမှောင်တစ်ည၏ ဘဝအင်္ကာ – Grab Love Story
မိဘတွေ ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ GM တစ်ယောက်အဖြစ် ထွန်းနိုင် လုပ်လာတာ တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီ။ မဖြူ မညိုအသားနဲ့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ရုပ်ရည်အသင့်တင့်နဲ့ ယောက်ျားပီသသူလည်း ဖြစ်တယ်။ အသတ် (27) ရည်းစားလည်းမရှိ လူပျိုကြီး ။ သဘောကောင်းသလို အလုပ်သမားတိုင်းက ချစ် ။ ပျော်ပျော်လည်း နေတက်တယ် ။
“ကိုထွန်း ကားမပါဘူးလား “
” နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်နေလို့ ဆေးရုံပို့ထားရတယ် “။ကဲ ပေါက်စီ မင်းဆိုက်ကျဲ ဒိုးနဲ့ အိမ်လိုက်ပို့ ကွာ “
“ဟုတ်ကဲ့ သူဌေး “
” အေးပါ ပေါက်စီရာ ငါသူဌေးကြီးဖြစ်ရင် မင်းကို Driver လုပ်ခိုင်းမယ် “
” တနေ့ ကိုထွန်း ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ “
“အေးပါကွာ မင်းလည်း ဒါဆို driver ဖြစ်မှာပေါ့ “
” ဟဲဟဲ အခါကြရင် ညဘက် taxi ဆွဲခွင့်တော့ ပေးနော် ဟားဟား”
“ခွေးကောင် ခုကတည်းက စီမံကိန်းနဲ့”
“ကဲရော့ ၂၀၀၀ ငါ့မြောက်ပြောနေတဲ့ကောင်။ ဩော် ညကြ ဘီယာသွားသောက်မယ် လာကြိုပို့ လုပ်ပေး။ မင်းမိန်းမလည်း သေချာ ပြောခဲ့အူးနော် ။”
” ဟုတ် ။ကိုထွန်း ခေါ်ရင် ကျုပ်မိန်းမက ဘာမှ ပြေပါဘူးဗျ “
တနင်္ဂနွေ စက်ရုံပိတ်တော့ အပါတ်စဉ် စနေ ညတိုင်း ကိုထွန်းက ဘီယာဆိုင် သွားနေကြ။ ကားက ဝပ်ရှော့ရောက်နေလို့ ပေါက်စီကို အမြဲ ခေါ်နေကြပေါ့ ။
” ကိုထွန်း ဇုံ ၂ ထဲ ကဆိုင်သွားကြမယ် “
“လခွမ်း ဝေးသာကွာ မင်းနင်းနိုင်ရင် သွားပေါ့ “
ကိုထွန်းနဲ့ သွားရရင် ပေါက်စီက ကပ်တီးရတော့ အကောင်းဆုံးဆိုင်တွေကို ခြေညောင်းခံ ပို့နေကြ ။ ခုလည်း ဇုံ ၂ ထဲ နင်းသွားလေရဲ့။
“ဟေ့ ပေါက်စီ ခနခန “
“ဘာလည်း ကျော်ကြီး ဘော့စ် နဲ့ ဘီယာသောက်ပြီး နက်သမီးလေးတွေရဲ့ အသံနားဆင်ဖို့ သွားမလို့ “
“လာပါအူး အရေးကြီးလို့ “
“ကိုထွန်း သွားလိုက်မယ် “
“အင်းသွားလေ ။ သေချာကြည့် ကူး ကားလာနေတယ် ငါပါ ရောပြီး မသာပေါ်ကုန်အူးမယ်။”
” သူ့ကို ဒေါ်မြ အိမ် ပို့ပေး စမ်းပါဟ လမ်းကြောင်းမကေါင်းတော့ ငါပို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ် “
“ကျော်ကြီး ကျော်ကြီး လုပ်လည်းစားချင် ကြောက်ကလည်းကြောက်သေး “
“အေးပါကွာ ငါလစ်ပြီ ပို့ပေးလိုက်ပါနော် “
“ကိုထွန်း ခန နေခဲ့မလား သွားပို့လိုက်အူးမယ် “
“လခွမ်း လမ်းမမှာ လိုက်မယ် မနေဘူး”
“မဟုတ်ဘူး ကိုထွန်း ….အကို့ သိက္ခာကြောင့်ပါ “
“အဆိုလည်း နေခဲ့ရတာပေါ့ကွာ မြန်မြန် ပြန်လာ ပေါက်စီ”
” ဟာ ကိုထွန်း နောက်မှာ စဘီးလှည့်ကင်း ရဲတွေ ၊ “
” ခွေးကေါင်တွေ ငါပါ ဂျေးအောင်းရတော့မယ် “
” အမ နောက်ကတက် ကိုထွန်း ပါ ရှေက တက်တော့ “
အမှောင်ထဲက မိန်းကလေး ကို သေချာ မမြင်ရ ဆိုက်ကားပေါ် ကျောချင်းကပ်မှ သူအသားတွေ တုန်နေတယ်။ ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ စကားလည်းမပြော ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံမှန် အသတ်ရှူနှုန်းမှန်သွားတယ် ။ သဘာဝ ပုံမှန်သနပ်ခါးနံ့လေးနဲ့ ရှမ်ပူ နံ့သင်း ဆံနွယ်လေးတွေက နူးညံ့လိုက်တာ။ ကြေးစားမိန်ခလေး တွေရဲ့ အနံ့မျိုးမဟုတ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရဲတွေက မှီလာခဲ့ပြီ ။
” ဟိတ်….ရပ် ….”
” ဟာ ….. sorry …ကိုထွန်းနိုင် …၊ “
“ရပါတယ် ကိုတင့်ဆွေ ….”
” ကိုယ့် လူပျိုကြီး ရိုးတယ်လို့ ထင်နေကြတာ ခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလည်း ။ ချစ်သူနဲ့ တွဲလာတာကိုး ၊ လိုက်ဖတ်တယ် ဗျာ။ ဘယ်တော့လည်း ဗျ ၊ မြန်မြန်ယူတော့ နော် “
” သူ့မေးကြည့်မှ ရက်သိရမှာ ဟားဟား”
” လုပ်တော့ ကိုယ့်လူ အချိန်ဆွဲမနေနဲ့…သွားလိုက်အူးမယ် ကိုထွန်းနိုင်”
“ပေါက်စီ ကျော်ကြီး မတွေ့ဘူးလား… ဒီကောင် ခြေရှုပ်နေတယ် “
” ခုန ကပဲ သွားလိုက်ပြီ …”
” အေးကွာ ဒါဆိုလိုက်အူးမယ် ။သွားပြီ ကိုထွန်းနိုင်ရေ…”
ခုမ ပါလာတဲ့ မိန်ခလေး ကို သေချာကြည့်မှ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် တည်ကြည်တဲ့ အိနြေ္ဒအလှပိုင်ရှင် ။ငြိုးငယ်နေတဲ့ မျတ်နှာလေးမှာ တောက်ပတဲ့ မျတ်လုံးအလှ
က ပိုလို့တောင် ဆွဲဆောင် နေပါကောလား ။
“ဟူး………တော်သေးတယ် ၊ ကိုထွန်း ကယ်ပေလို့ပေါ့.. သရုပ်ဆောင်လည်း မိုက်တယ် “
“ခွေးကေါင် … မြန်မြန်နင်း ပို့တော့ “
” ဒေါ်မြအိမ် ပို့မရတော့ဘူး ဟိုကောင်တွေ လမ်းထိပ်က စောင့်နေမှာ “
” ညီမ ဘယ်ကို ပို့ရမလည်း”
” အမေ့ကျန်းမာရေးကြောင့် ဒီအလုပ် လုပ်ရတာပါ တစ်ခါမှ မလုပ်ဘူး ဘူး”
“ဇုံ ၁ အကို “
” ဟာအဝေးကြီး ….”
” နေအူး တစ်ခြားသူ နဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်..မယ်”
” ကျမ လိုတာ ၅ သိန်းလောက်ပါ ချိတ်တာအဆင်မပြေလို့ ဒေါ်မြ ဆီ အကူညီတောင်း ချိတ်ခိုင်းမလို့ပါ”
“ကဲ … ကိုထွန်း ကူညီလိုက်ပါလား”
“ကျနော်တို့ ဆိုက္ကား သမားပါ သူ့ကိုမမြင်ဘူးဘူး ကိုထွန်း တကယ်လိုလို့ နေမှာ …။ ကိုထွန်း ရည်းစားပဲကိုး …ဟဲဟဲ”
တကယ်ပဲ လိုနေသလား? ဘာအပြစ်မှ ပြောစရာမရှိတဲ့ သူလေးပဲ ။ယောက်ျားတိုင်းစွဲမတ်သူလေးပါ ။ ကိုယ်ထွန်းမြင်မြင်ချင်း ချစ်မိပါတယ် ။
” ကိုထွန်း မူမနေပါနဲ့ဗျာ ရင်ခုံနေတာ သိပါတယ် ဘယ်တည်းခိုခန်း ပို့ပေးရမလည်း”
“အကို ခေါ်မယ်ဆို တစ်ခြားနေရာ သွားပေးပါ လှိုင်သာယာတော့ မလိုက်ပါရစေနဲ့၊ ကြီးကျယ် ဂျီးများတာ မဟုတ်ရပါဘူး “
“အေးလေ… တစ်ခြားနေရာသွားကြတာပေါ့ “
“ပေါက်စီ ရော့ အိမ်သော့၊ ဗီရိုထဲက ပိုက်ဆံ ၃သိန်းလောက် ယူလာ ပို့ပေး ၊ ဟိုတယ်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပြီးနေရာ ပြောမယ် “
“ဟိုမှာ taxi ခေါ်လိုက် “
စွဲမတ်စရာ အလှကြောင့် ကိုထွန်းရဲ့ ရိုးသားတဲ့ သိက္ခာတွေ အလှတရားကြားမှာ အရည်ပျော်သွားရပါတကောလား?
“အကို ရော့ မှတ်ပုံတင်…..”
“….. ထက်ထက်ဝေ……တဲ့လား “
“ပေါက်စီ ကို ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်အူးမယ် ၊ အခန်းက စောင့်နေလေ”
ပေါက်စီကို ငွေလာပို့ခိုင်းဖို့ ဖုန်းဆက်ပြီး အခန်းထဲ လိုက်ဝင်သွားတော့ အဖြူ ရောင်မွေယာပေါ်မှာ ပန်းနုရောင် ရှပ်အင်္ကျီ ကိုယ်ကပ်လေးနဲ့ ပတ်လက်လေးပြုံးနေပြီး ရင်သားနှစ်မွာက
ဖို့မောက်ကာ ကိုထွန်းစိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ပဲ နုမြူ မီးရောင်အောက်မှာ ထက်ထက်ဝေ ပေါ် မှောက်ချ လိုက်တော့တယ်။
“ဟင့် လူပျိကြီး နော် ခန နေပါအူး “
တကယ့်လူပျိုကြီးဘဝ မိန်မ အချောအလှနဲ့ထိတွေရတော့ ကာမ စိတ်တွေက ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရ သိန်းမနိုင် ဖွားဖတ်တော် ထောင်မတ်လို့ ထက်ထက် အဖုတ်ဝ အန်ကျထောက်လျတ်သား ။ ထက်ထက် မျတ်နှာလေး တချတ်ညှိုးသွား တယ်။
ကိုထွန်းက ပုဆိုးနဲ့ အတွင်းခံလေး ချွတ်သလို ထက်ထက် ကလည်း အလိုက်သင့် ထမီနဲ့ ပန်းရောင်အောက်ခံဘောင်းဘီလေး ချွတ်ပေးလိုက်တယ် ။
ဖြူ ဝင်းတဲ့ ပေါင်နှစ်သွယ်ကြားက အမွေးပါးပါး ဖောင်းဖောင်းကြွကြွ ထက်ထက် အဖုတ်လှလှကြောင့် လူပျိုကြီး ကိုထွန်း ရဲ့ ဖွားဖတ်တော် သံချောင်းပမာ တင်းကာလာပြီး ထက်ထက်ပေါင်လေးကား ကါ အဖုတ်ထဲ အတင်းကာ ထိုးတော့ တာပဲ”
“ကို… ပြန်ထုက်ပါအူး နာတယ် “
ကိုထွန်းလီးတစ်ဆုံး တောင်မထည့်ရသေး ။ ထက်ထက် မျတ်နှာ မဲ့သွားလို့ ပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ် ။ နှစ်ဦးသားရဲ့ ပထမဆုံး ထိတွေ့မှု့က အသားတွေ တုန်နေကြတယ် ။ ထက်ထက်ကလည်း ပထမဆုံး လီးတစ်ချောင်းရဲ့ ထိတွေ့မှု့ကြောင့် အဖုတ်လေးက ခုန်ကြွခုန်ကြွနဲ့ အရည်တွေ ထွက်လာပြီ ။ကိုထွန်းမှာ မနေသာတော့ပဲ လီးကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီ “
” အားးးး ကို ဖြေးဖြေး”
•အင့် အင့် အင့် “
“ဟင့် အင့် အားးးးးးး”
“အင့်..အင့် ..အင်ု..အင့်.အင့် အင့်အင့်”
လူပျိုကြီးကိုထွန်း ရဲ့ပထမဆုံး ဖွားဖတ်တော် ရှင်ပြုပွဲ စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ရပြီ၊ လီးကြီးတစ်ဆုံးထိ ထိုးထည့်ပြီး ထက်ထက် ပေါ်မှောက်ချလိုက်ကာ မျတ်နှာချင်း ပါးချင်းကပ် လိုင်တိုင်လှလှ ကိုထွန်းနမ်းချလိုက်တယ်။
” ကို…ယားတယ် “
ထက်ထက် မျတ်နှာ အပြုံးသန်းလို့ ဆုံမိတဲ့ မျတ်ဝန်းနှစ်ဆုံက အကြင်နာတွေပြည့်နှပ်လို့ ပါးစပ်ချင်းထိ နှပ်ခမ်းခြင်း ဆုံမိလေသောအခါ…….
” ပြတ်ပြတ်ပြတ်ပြတ် “
“ဘယ် ခေါ်လိုက်တာလည်း ဟင်”
“ထက်ထက် လို့ လူတိုင်းခေါ်နေကြတာ။ ဝေ လို့ ပထမဆုံး ခေါ်တာ ကို ဖြစ်နေလို့ ။”
“ဝေ လို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်နော် “
“ဝေ ကို အရမ်းချစ်သွားပြီ”
“ဘယ် လိုခေါ်လိုက်တယ် ဝေ”
“သိဘူး သူ့ဘာသာ ထွက်သွားတာ”
ပြုံးပြီး ဘေးစောင်းသွားတဲ့ ဝေ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး အသည်းယားပြီး ဆွဲလှည့်လိုက်တာ တင်းမာနေတဲ့ နို့တွေ ကိုင်မိလိုက်တယ်။
“ဟင့် လူလည်ကြီး….. “
“ထ ရေချိုးတစ်ခုခုထွက်စားရအောင် “
“ဟာ …. ရှတ်ပါတယ် ချိးရဲပါဘူး”
ပန်းနုရောင် ရှပ်အင်္ကျီ ကြဉ်သီးလေးတွေ လတ်ကဖြုတ်နေမိတယ် ဝေ ကတော့ လတ်ကလေးကို အသာပဲ တွန်းထွန်းနေတယ်။ကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပြီး အင်္ကျီလေးလှန် ဘော်လီအနက် ဖိကြပ်ထားတဲ နို့တွေကိုင်ပေးပြီး ဘော်လီချွတ်တာ ချွတ်မရတဲ့ ကိုထွန်း ။
“မောင် လူရိုးကြီး ခစ်ခစ်”
ဝေ့ အပြုံးတွေနဲ့ ဘော်လီချွတ်ပေးပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ဝေ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းပဲ ပွေ့ဖတ်ထားလ်ုက်တယ်။ ဝေက ကိုထွန်း အကျီ ပြန်ချွတ်ပေးပြီး အသားချင်ကပ် အတူပွေ့ဖတ်နေလိုက်ကြတာ။
“မောင် လွန်လွန်းတယ်နော် “
“မောင့် ဟာကြည့်လေ ပေါင်လာကပ်ပြီး ဝေ့ ညီမလေးလာ ချိန်းခြောက်နေတယ်”
အသားချင်းကပ် ကိုထွန်းရင်ဘက်နဲ့ ဝေ့နို့နှစ်လုံးဖိဖိပွတ်ပြီး ကိုထွန်းစိတ်တွေ တစ်ဖန်နိုးထ ပါးစပ်ခြင်းတေ့ နှုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်
” ပြတ်ပြတ်ပြတ်ပြတ်ပြတ် “
ဝေ့နို့တွေချေပြီး စောက်ဖုတ်လေးပါ ပွတ်ပေး နုတ်ခမ်းခြင်းက တစ်ဦးကိုယ်တစ်ဦး ခွဲမရအောင်စုပ်နေကြတယ်။ ဝေ့ စိတ်တွေလည်း ရိုးရိုးယွယွ ဖြစ်လာ ပြီး ကိုထွန်းလီးလေးကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ဝလေး တေ့ပေးလိုက်တော့ ကိုထွန်း စောင့်လိုးတော့တာပဲ။
• အာ့အာ့ အားးးးး”
” အင့်အင့်အင့်အင့်အင့် “”
” အားးးး အီးးးးအားးးးအိုးး”
” အင့်အင့်အင့်အင့်အင့် “
” ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် “
“အားးး မောင်ရယ်…ပြီးလိုက်တော့ နာလာပြီ”
အား။ မောင် အားးးးးး
ဝေရော ကိုထွန်းရော အတင်းကိုဖတ်ထား တွယ်နေလိုက်ကြတာ မခွဲနိုင်မခွာရက်။
“မောင် ထ ရေချိးမယ် “
တူနှစ်ကို ရေချိုးပြီး ပေါက်စီလည်းရောက်လာ အပြင်မှာ ထမင်းထွတ်စား ခဲ့ကြတယ်။
” ဆရာတို့ ညားခါစ လင်မယားအရမ်းလိုက်ဖတ်တယ်”
“ကျေးဇူးပါ ညီမ သော့ထားမယ် ထမင်းသွားစားလ်ုက်အူးမယ်ဗျ”
“ကိုထွန်း တကယ်လိုက်ဖတ်တယ်ဗျာ “
ဝေဟာ တကယ်ကို ရိုးသားဖြူစင်သူလေးပါ ၊ဘဝအခြေနေအရ တစ်ခန ကြေးစားဘဝ ရောက်နေရပေမဲ့ အပြစ်မရှိ အလှပိုင်ရှင် မိန်းမကောင်းလေးတစ်ယောက်ပါ။
စားသောက်ပြီး ပေါက်စီလည်း ပြန်လွတ်လိုက်ကာ ဟော်တယ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကုတင်ပေါမှာ ဝေ့မျတ်နှာလေး ညှိုးနေတယ်။
“ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး မောင်ရယ် အမေ့ကို လိမ်လာမိလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါ”
“ဝေ အမေ့ကိုစိတ်မချလို့ ပြန်ချင်နေတာလား”
“မဟုတ်ပါဘူး မောင်ရယ်…ညကိုင်းဆင်းရမယ်လို့ ပြောလာတာပါ”
“အင်းပါ ဝေ့ အိမ်တော့နော် … မနက်ကြရင် ဝေပါနေမကောင်းဖြစ်နေမယ်”
“မောင်ရယ် ….. ဝေ့ရင်ထဲမှာ မောင့်ကို တကယ်ချစ်သွားပြီ “
“တူတူပါ ပဲ ဝေ ရယ် ….”
“မောင် ဖတ်ပေးထားမယ် အိပ်တော့နော်ချစ် “
“ချစ်တယ် မောင်ရယ် …….”
အဲကွန်း အေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ တစ်ဦးကို တစ်ဦးအတင်းဖတ်တွယ်ကါ အလင်္ကာညလေးတစ်ည ကုန်ဆုံးတော့မယ်ပေါ့။ မနက် ၃နာရီ ထိုးတော့ နှစ်ဦးသား တူတူနိုးနေကြတာ တစ်ယောက်က်ုတစ်ယောက် နိုးနေမှန်း မသိ။ ဝေ ဘေးစောင်းလေး ကွေး အ်ပ်နေလိုက်တာ ကိတ်ပြီး ကားနေတဲ့ တင်ပါးတွေကြောင့် ကိုထွန်းလီးက တန်းပြီး တောင်လာတော့တာပဲ။ ကိုထွန်း မနိုးသေးဘူးထင်ပြီး ဝေက ကိုထွန်းလတ်ကလေးမ ရင်ခွင်ထဲ ကပ်လာပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ် လတ်လေးတင်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက နိုးနေတော့ အသာလေး ဆွဲဖတ် နို့လေး ကိုင်လိုက်တယ်။ ဝေ့ တင်လေးက ကိုထွန်း ပေါင်ဆုံဆီကပ်လာ တောင်နေတဲ့ လီးက ဝေ့ တင်ကြား ထောက်မိသားဖြစ်တော့ ဝေ တစ်ချတ်တွန့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်လေး တုန်သွားတယ်။
“မောင် နိုးနေလား “
“အင်း … “
ဝေ့ နို့လေးတွေကိုင်ချေ ။ ဝေကလည်း နုတ်ခမ်းတွေစုပ် ကိုထွန်း အကျီ ကြယ်သီးတွေ ချွတ် ကိုထွန်းလည်း ဝေ့ အင်္ကျီတွေ ချွတ် နို့ထွားထွားတွေ ချေစို့ ။ ဝေ့ပေါင်တွေ တွန့်လာပြီး ကိုထွန်းလီးလေးကိုင် သူအဖုတ်ကို တေ့ပွတ်ပေးနေတယ်။အရည်ရွဲနေတဲ့ အဖုတ်လေးထဲ့ ကိုထွန်းလီးကြီး ထိုးထည့်လိုက်ပြီ။
” အင့် အင့် အင့် အင့်အင့်အင့်အင့်”
“အာ့ အီး အားးးး”
“အာ့ အာ့ အားးး ဟငြးးးးး အိုးးးး အားးးးးး”
“ဗွတ် ဗွတ်ဗွတ် ဗွတ်ဗွတ်ဗွတ်”
“အားးးးး အဲယိုး အားးးး အငြ……ဟူးးးး”
“အား မောင် ပြီးလိုက်တော့ အားးးးးးး”
အင့် အင့် အင့် အင့်အင့်အင့်အင့်”
” အား အား အိုဟိုးးးး အငြးးးးးးးးးးးးး”
” အင့်…. ………..”
“အမေ့ ………အားးးးးးးး ဖတ်ထားပါမောင်ရယ်……..”
မောမောပန်းပန်း နှစ်ဦးသား အိပ်လိုက်ကြတာ မနက် ၉ နာရီ ထိုးသွားပြီ……။
“ဝေ…..ထ ၉ နာရီထိုးပြီ “
“ထ ရေချိုး ပြန်ကြမယ် ….”
“ဟာ တော်တော်နောက်ကြသွားပြီ “
“ထပါ ချစ်ရယ် မောင်လ်ုက်ပို့မယ် အိမ်ရောက်ရင်သာ အလုပ်က မန်နေဂျာလို့ ပြောလိုက်ပေါ့ “
” အင်း…..ရေချိုးနှင့် မောင်ကားလာပို့ဖို့ ဖုန်းဆက်လိုက်အူးမယ်”
ဝပ်ရှော့က ကားလည်းပြီး လာပို့ ။ဝေ့ကို သူ့အိမ်ထိ လိုက်ပို့လိုက်တယ်။ သွတ်မိုး ထရံကာ ၈ခန်းတွဲ အငှားလိုင်းခန်းလေးမှာ ပေါ့။ ဝေ ခေါ်လို့ အိမ်ထဲ လိုက်သွားတော့ အိပ်ယာထဲက လူမမာရယ် ဘေးက ဆယ်ကျော်သတ် ကောင်လေးရယ် ။
” မေမေ….မမ ပြန်လာပြီ “
“သမီးလေး ရေချိုး နားပါသမီးရယ် ဧည့်သည်ပါလာတာပဲ သားငယ် လတ်ဘက်ရည် နဲ့မုန့်သွားလိုက် ထိုင်ပါ ငါ့တူရယ်”
“ရပါတယ် ဒေါ်ဒါ် မဝယ်ပါနဲ့ “
“အမေ သူက သမီးတို့ စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေးပါ “
” ဝေ… ဒေါ်ဒေါ်ကို ဆေးရုံပို့ကြမယ် “
“ကဲပါ… တစ်ခါတည်း လိုက်ပို့ မယ် ..။ ဒေါ်ဒေါ် ဘာမှ အားမငယ်နဲ့နော် ..”
“ရပါတယ် တူမောင်ရယ်… အဒေါ်တို့မှာက…..”
“ကဲပါ လာ ကျနော်လိုက်ပို့မှာပါ … ညီလေး အမေ့ကူတွဲ၊ ဝေ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့လောက်ပဲ ထည့်လာခဲ့ “
ဝေတို့မိသားစုကို ခေါ်ပြီး အိမ်မှာ ငွေထက်ယူကာ ရွေဗဟို ဆေးရုံကို ပို့ပေးခဲ့တယ် ။ ကိုထွန်းရဲ့ မူလ စိတ်ခံဖြူစင်သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဝေ တို့မိသားစု ကံကောင်း ခဲ့တာပေါ့ ။
“ဝေ… ရော့ ဒါက ဝေတို့ အခြားသုံးဖို့ ၊ ဆေးဖိုး အားလုံးက မောင်ရှင်း ထားပေးမယ် ၊ မောင့်သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ကို အကုန်မှာခဲ့ပေးတယ်၊ အလုပ်ကိစ္စ ဖုန်းလာနေလို့ မောင်ခန သွားအူးမယ်” ညနေ မောင်ပြန်လာမယ်နော် “
“မောင်… ငွေတွေက များလိုက်တာ ၁၀ သိန်းများတောင် မောင်ရယ် “
“အမေ့ကျန်းမာရေးတွက် ယူထား ဝေ … မောင်ခန သွားလိုက်အူးမယ် “
“အင်း… သွားပြီနော် မိန်းမ”
ကိုထွန်းနိုင်မိဘတွေ ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံကို မိဘတွေက အပိုင်ဝယ်လိုက်ပြီး စက်ရုံတိုးချဲ့ဖို့ ကိုထွန်းနိုင် နိုင်ငံခြား ခန သွားရမယ်။
“ဝေ…..မနက်ဖြန် မောင် စက်ာပူသွားရမယ်..မောင်မရှိတုန်း အမေ့ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက် ရော့ ဒါက ချတ်စာအုပ်”
“ကုန်ပါတယ်… အမေ့ကို ကျန်းမာရေးဂရုစိုက် မောင်ပြန်လာရင် တူတူနေကြမယ်နော် မိန်းမ “
“မောင်ရယ် အလောက်တောင် ပေးဆပ်ရသလား ၊ အညတရ ဝေ ကို မောင်တန်ဘိုးထားတာ ဝေလေ မောင့်စကားကို အလေးထားပါ့မယ် မောင်ရယ် …..”
” ပေါက်စီ မတုပ် ….”
“ဟာ ကိုထွန်းပြန်လာပြီလား ဖုန်းဆက်တော့ မပြောပဲ ကျနော်လာကြိုမှာပေါ့”
“အောင်မာ မင်းက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရပြီလား”
“ရပြီ ….ကိုထွန်းရ “
“ကိုထွန်း….စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပြောရအူးမယ် ၊ မဝေ ချတ်စာအုပ် လာပေးသွားတယ် “
“ဒါဆို ဝေ တို့က “
“သူတို့ ဇာတိ ကျိုက်လတ်ပြန်သွားပြီ ၊ သူ့အမေက ခွဲစိတ်ဖို့ လတ်မခံ ရွာမှာပဲ ခေါင်းချပါရစေ ဆိုလို့ ၊ နောက် သူတို့ဘကြီး ဘုန်းကြီးက လည်း ပြန်ခေါ်လို့ ပြန်သွားကြပြီ “”
” ပေါက်စီ ဝေ ဘာမှာသွားသေးလည်း “
“ဘာမှ မှာမသွားခဲ့ဘူး ချတ်စာအုပ် ပဲ ပေးသွားတယ် “
“အေးလေ….ကန်မကုန်ရင်ပြန်ဆုံကြမှာပေါ့ ဖူးစာမှန်ပြန်ရရမှာပေါ့ “
” မရနိုင်တော့ဘူး ကိုထွန်းနိုင်….”
“အကြောင်းစုံကို ကိုထွန်းနိုင်အမေ အန်တီ နိုင်သိသွားပြီ၊ မဝေနဲ့ အန်တီနိုင် တွေ့သွားကြတယ် အစက အန်တီနိုင်က သဘောကျတယ် နောက်ပိုင်းစုံစမ်းတော့ အကြောင်းစုံသိပြီး ကိုထွန်းနိုင်ကို မိန်းမ ပေးစားဖို့ သူ့တို့ မိတ်ဆွေ သမီး ကို စတ်ရုံမှာ အုပ်ချုပ် ခိုင်းထားလိုက်ပြီ “
” ဟူးးးးးး……စက်ရုံခြေနေကရော ….”
“ခု ဆယ်ရက်လောက် အတွင်းမှာ အလုပ်သမားတွေ နားနေကြတာများတယ် ထုတ်ပစ်သူတွေလည်း ရှိတယ် ၊ ကိုထွန်းအားနာပြီး ကျန်သူတွေ ဆက်ဆင်းနေကြတယ်”
“အေးလေ ငါပြန်ရောက်ပြီ ပဲ စက်ရုံကို အရင်တိုင်း ပြန်ဖြစ်စေရမှာပေါ့ “
” ပေါက်စီ ရေ… ကျောင်းရှေ့ခနရပ်ကွာ ဆေးဆိုင်ကြီးမှာ မေမေအတွက် ဆေးဝယ် ရအူးမယ် “
“ကိုထွန်း ငိုနေတဲ့ ကလေးဘေးက ကျောင်းသား လေးက ကိုထွန်းနဲ့ တူလိုက်တာ “
“အေးဟုတ် တယ် ဝေရဲ့ သားများလား “
“ကိုထွန်း မဝေကို အမြဲသတိရနေတယ်နော် “
” ရတာပေါ့ ပေါက်စီရာ “
” ဦးဦး ဒီညီလေးကို မုန်ဝယ်ကျွေးလိုက်ပါဗျာ ၊သားဆီမှ ပိုက်ဆန်ကုန်သွားလို့”
” မစားချင်ဘူး ဦးဦး၊ ဒီညီလေးဝယ်ကျွေးလိုက်ပါ သနားပါတယ်”
” ကိုထွန်း စိတ်ဓာက်အတိုင်းပဲနော် ကိုထွန်း “
” ပေါက်စီ ကလေးကို မုန်ဝယ်ပေးလိုက်ပါ ကွာ”
“သား သားနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လည်း “
” ထက်ဝေထွန်းနိုင်။ ပါ ခင်ဗျ”
“ဖေဖေက မရှိတော့ဘူး မေမေက ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ”
“သားဖေဖေက ဘယ်ရောက်သွားလို့လည်း “
” မေမေ ကို မေးရင် မျတ်နှာမကောင်းလို့ သားမမေးတော့တာ “
“သားတို့ ဘယ်မှာနေလည်း “
” ဟိုဘက် တစ်လမ်းကျော်က ထက်ဝေထွန်းနိုင် စားသောက်ဆိုင်က မေမေ ဆိုင်ပါ “
” ဦးဦး သားလေးလေး လာကြိုနေပြီ ….”
“ဟင်…ဗင်ကားအဖြူလေးပေါ်က ဆင်းလာတာ မင်းဝေ ပါလား”
” ဟာ အကိုကြီး…. ဒါ အကိုကြီးသားလေ…”
“မင်းဝေ … မင်းတို့ ငါ့ကို စိတ်မနာကြဘူးနော် “
“အကိုကြီးကလည်း ဘာစိတ်နာစရာရှိလည်း ကိုကြီးရာ ၊ ကံကြမ္မာ က ဖန်တီးပေးသွားတာပဲ..၊”
“ငါ့ကိုငါ တာဝန်မကျေသလိုပဲ.. မင်းဝေ”
” အကိုကြီး မိန်းမ မပါဘူးလား”
” အိမ်ထောင်ကျပြီး တနှစ်မပြည့်ခင် ကွဲလိုက်ကြတယ် “
” ကျနော်တို့လည်း နယ်ပြန်ရောက်တော့ မေမေက ရောဂါ ပျောက်သွားတယ် ဘဘုန်း ဗမာဆေးနဲ့ကုတာ ၊ အတော့မှ မမက အကြောင်စုံပြောပြတာ ၊ မေမေက မမကို အပြစ်မတင်သလို အကို့ကြီးကိုလည်း စိတ်မနာပါဘူး ။ အကိုကြီး ပေးလိုက်တဲ့ ငွေနဲ့ မုန်ဟင်းခါးနဲ့ ထမင်းဆိုင်တွဲဖွင့်ပြီး နိုင်နိုင်လေးကို
မွေးခဲ့တယ် ၊ အဆင်ပြေတယ်ပြောပါတော့ ကိုကြီးရာ ၊ရန်ကုန်တက်လာပြီး ခုလသာမှာ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတာပေါ့ “
” မမနဲ့ ကျနော်က မနှစ်ကမှ တူတူဘွဲ့ယူ ပြီးတာ “
” အော်…. ဝေ က ပေးတဲ့ကတိ ကျေပါတယ်ကွာ “
” လာကိုကြီး အိမ်သွားကြမယ်”
” နိုင်နိုင် သူက မင်းအဖေလေ”
” တကယ် …. “
” မေမေ….. ဒီမှာ ဖေဖေ ပါလာပြီဗျ “
” ဟင်……မောင် …”
” ဝေ…တာဝန်ကျေပြီး အရမ်းတော် အရမ်းထက်မြတ်ပါတယ်”
” မောင် နဲ့တွေ့ပြီး မောင့်အကူအညီတွေကြောင့်ပါ “
“ဒီတော့ မင်တို့ မိသားစုက တူတူနေတော့မယ်ပေါ့ “
” အမေ နေကောင်းသွားပြီနော် “
“ကောင်းသွားပြီ သားရဲ ….. “
“အမေ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေရယ် ကျနော့်ပေါ် စိတ်မနာကြလို့ “
“သားရယ် ဘဝ ကံအကြိုးပေးတွေပဲ လေ..ခုကြည့် မင်းတို့ မိသားစု ပြန်စုံကြပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့သမီးက သစ္စာပိုရှိတယ်နော်”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ အမေရယ်ရယ် ဝေ့ကို လျော်ကြေး ပေးတဲ့အနေနဲ့ တစ်သတ်လုံး ဘာမှ မလုပ်ခိုင်းပဲ ရွေပေါ် မြတင်ထားပါ့မယ်လို့ ကတိပေးတယ် အမေ “
” ငါ့မြေးကိုတော့ မင်းမိဘတွေ အပိုင်မသိမ်းရဘူးလို့ ကတိပေးရမယ် “
“စိတ်ချပါ အမေရယ် ……”
“အမေ ခုတော့ ဝေနဲ့ သားကို ခေါ်သွားအူးမယ် အဖေနဲ့အမေလည်း ရောက်နေလို့ “
“ခေါ်ပါတော် မင်းမယားကလည်းမလိုက်ချင်ရှာဘူး ကပ်နေလိုက်တာ”
” အမေ ရေ။ အမေ….လာကြည့်ပါအူး”
“ဟဲ့ ငထွန်း …..အော်ကြီးဟစ်ကြယ်နဲ့ “
“ဟင် ထက်ထက်ဝေ ….”
” လာ သမီး အမေ့ကို ခွင့်လွတ်ပါ သမီး “
“ငါ့ချွေးမ ကြီးကမှ ငါ့သားနဲ့ တကယ်လိုက်ဖတ်တာ “
” အဖေ ဒါအဖေ့ မြေးလေ ….”
“ဟာ မောင်ထွန်း မင်းနဲ့ တစ်ပုံစံတည်းပဲ…”
“ဦးလေးရေ ရုပ်တင်မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ပါ အတူတူဗျ”
“ဟုတ်လား ပေါက်စီရ ..”
” မြေး ဖိုးဖိုး ဆီလာပါအူး “
“ဖိုဖိုးတို့ အညာပြန်ရင် ဖိုးဖိုးတို့နဲ့လိုက်ခဲ့နော် “
“ဟုတ်တယ် မြေးလေး အဖွားတို့နဲ့ လိုက်ခဲ့နော် ….”
“ဟုတ်….သားသားလိုက်ခဲ့ချင်ပါတယ်.. ဒီက ဘွားဘွား စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာလည်း ဆိုးတယ်.. “
“ဟားဟား စကားတက်တာကတော့ ဒေါ်မိမိနိုင်အတိုင်ပါပဲနော်”
“အမလေး ကျုပ်မြေး အစစ်ပါတော် သမီးဝေဝေရေ အမေ့ကိုခွင့်မလွတ်ချင်နေ မြေးတော့ အပိုင်သိမ်းပြီအေ့ “
“အမေ့မြေးတာ ညှိပါ အမေရယ် “
” မမဝေက ခု တော်တော်ကို ချောလာတယ်နော်”
“ချောတာထက် တကယ်ထက်မြတ်တဲ့ သူဟ ဘွဲ့လည်းယူပြီးပြီ လသာမှာ စားသောက်ဆိုင်အကြီးကြီး ပိုင်ရှင်ဟ “
” ဟုတ်လား … မဝေလည်း ပြောင်းလဲလိုက်တာ ၊ကိုထွန်းကလည်း စက်ရုံ ၂ လုံးထိရှိသွားပြီ ၊ မပြောင်းလဲတာ ကျုပ်တို့ လင်မယားပဲ “
“မတုပ် ရယ် ရှင်တို့ဆရာသူဌေးပဲ အကူညီတောင်း ပေါ့ “
“မဝေရယ် ကျမှ ဘာမှ မလုပ်တက်ဘူးတော့ “
” လူဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားသင်ယူရင် တက်ရမှာပေါ့ “
” ကျမ အချတ်အပြုတ်သင်ပေးမယ် စတ်ရုံမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပေါ့”
“အင်း ငါ့ချွေးမ စိတ်ဓာက်ကတော့ တကယ်လေးစားစရပဲ “
“မဝေ ညနေကြ မိသားစု အကုန်လုံး မဝေဆိုင် သွားစားကြမယ်လေ ….”
“သား အမေတို့ အခန်ထဲ လိုက်မလား…”
“ဖိုးဖိုးနဲ့ ဖွားဖွားက သားလိုချင်တာလိုက်ဝယ်ပေးမလို့တဲ့ “
” ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ကို ဂျီ မကျရဘူးနော်…”
“မတုပ် … ထမင်းချတ်တဲ့အဒေါ်ကြီးကို ထမင်းမချတ်ခိုင်းနဲ့တော့ …ညကြ ဆိုင်လိုက်ခဲ့ကြ”
“မိန်းမ အရင်ကထက် တင်တွေ ရင်တွေ ပိုကိတ်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ပိုလှလာတယ် “
မွေ့ယာပေါ် အတူလှဲပြီး နှုတ်ခမ်းတွေ အနမ်းဝေလို့……
ချစ်ငွေ့သတ်အထိတွေ့တွေနဲ့ ရမ္မတ် ဒီဂရီ တက်လို့ ငယ်ကအချစ်လို တစ်ဦးကိုယ်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ချွတ်ပြီး ဗလာကိုယ်တည်း အချစ်ကြီးလိုက်ကြတာ….
“အားးးး ဖြေးဖြေးထိုးလေ မောင်”
“မိန်းမ စတွေ့တုန်းက အတိုင်းပဲ ကျပိလိုက်တာ”
“အား အာ့ “
“အင့်အင့် အင့် အင့် အင့်အင့်အင့်အင့်”
အင့် အင့် အင့် အင့်အင့်အင့်အင့်
“မောင်.. ……. ကလေးထပ်ယူအူးမှာလား
“အားးးးးးးး မောင့်သူတ်တွေ အများကြီးပဲ “
“မိန်းမ မချွတ်သေးဘူး ထိုးထားမယ်နော်”
“ဖိတာတော့ နည့်းနည်းလျော့ အရင်တိုင်ပဲ့ ခနလေးပဲထွတ် စောင့် ချလိုက်တာ မျတ်လုံးတောင်ပြာသွားတယ်……”
မိတူးဘဝ ပထမရင်ခုန်သံ (စ/ဆုံး)
အကို လိုး မယ် ဆို အဆင်သင့်ပါ (စ ဆုံး )